नेपाल आज | प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ब्रम्हलुट ( भिडियोसहित)
अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकारकारमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ– भ्रष्टाचारको । सरकारका मन्त्रीहरु नै एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथ्यहरु बाहिरिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली माथि नै शंका गर्न थालिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित नागरिक अगुवाहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण मात्र होइन प्रवद्र्यन नै गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । पछिल्लो समय संचार मन्त्रीसमेत रहेका गोकुल बास्कोटाको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि कतिपयले त प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
यीनै सन्दर्भमा नेपाल आजले पूर्व डिआइजी विजयराज भट्टसंग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, भट्टसंग गरिएको कुराकानीका प्रमुख अंश :
क ) प्रधानमन्त्रीले देशको नक्शाको आकारमा केक काटी जन्मोत्सव मनाउनु देशद्रोह हो । प्रधानमन्त्रीसहित केक बनाउन अर्डर गर्ने यति होल्डिङ्सको प्रतिनिधि र केक बनाउनेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । राष्ट्रमाथि खेलवाड गर्नेहरु माफीको हकदार छैनन् ।
ख ) प्रधानमन्त्री केपी ओलीले होली वाइन खाएको दिनबाट चेतना गुमाएका छन् । के गर्ने क नगर्ने भन्ने नै उनले छुट्याउन छोडेका छन् । उनीसंग उनको मन्त्रिमण्डल र सचिवालयले पनि होली वाइन पिएको दिनबाट होश गुमाएको छ ।
ग ) यति होल्डिङ्स भनेको पूर्व एमालेहरुको अवैध रकम लगानी गर्ने संस्था हो । तुरुन्त यतिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।
घ) देशभर खोलिएका अपार्टमेन्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, मेडिकल कलेज लगायतमा नेताहरुको कालोधन प्रयोग भएको छ । यो छानबिन गर्नुपर्छ ।
ङ ) सरकारका मन्त्रीहरुले लुट मच्चाउन उद्धत छन् । एउटै ठेकेदारलाई ६१ वटा ठेक्का दिएकोसम्म पाइएको छ । यस्ता ठेकेदारको सम्पत्ति रोक्का गरी छानबिन थाल्नु पर्दछ ।
च ) पूर्व कृषी मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषी अनुदानका नाममा ६० अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन्, यो कसले छानबिन गर्ने ?
छ ) नुवाकोटमा ‘कोल्ड स्टोर’ बनाउने भनेर १ अर्ब रकम सिध्याइएको छ, यो कसले छानबिन गर्ने ?
ज ) सडक आयोजनाका नाममा पूर्व भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री रघुबीर महासेठले अरबौ रकम हिनामिना गरेका छन् । यसको छानबिन किन अघि बढ्दैन ?
झ ) अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करोडौं भ्रष्टाचार गरेका छन् । कतिपयलाई उपचारको नाममा, प्रधानमन्त्री रोजगार, गरिवी निवारण, कार्यकर्तालाई सहयोगका नाममा खतिवडाले करोडौं सकेका छन् ।
ञ ) अहिले पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो काण्ड जो छ यसमा प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल पनि संलग्न छन् । २०७३ सालमै विजयप्रकाश मिश्र भन्ने व्यक्तिले सेक्युरिटी प्रेस किन्ने प्रस्ताव तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष लगेका थिए । पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष यो प्रस्ताव सुनाएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । अहिले दोस्रो कार्यकालमा पुनः त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा गोकुल काण्ड सार्वजनिक भएको हो । यसमा संलग्न सबैलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।
ट ) अहिले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म साधारण खर्च निकै बढी र विकास खर्च एकदम कम छ । विकास खर्च अहिले नगर्नु भनेको असारमा भ्रष्टाचार गर्नलाई हो । हेर्दैै गर्नुहोला आउँदो असारमा दुईवटा ‘एमसीसी’ बराबरको रकम खोलामा बगाउनेछन् ।
ठ ) संविधान संशोधन गर्ने हो भने गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हटाउने गरी गर्नुपर्छ । त्यो भनेको यो संविधान नै समाप्त गर्ने हो । अब २०४७ सालको संविधान लागु गर्नुपर्छ ।